KARATRA « ASSISTANT PARLEMENTAIRE » : Miparitaka ao Toamasina, lasa fitaovam-panaparam-pahefana
Ireo polisy manao fanaraha-maso ny fifamoivoizana amin’ny lalana ao Toamasina no tena nahatsikaritra ny fiparitahan’ny karatra « assistant parlementaire » tato ho ato. 19 mars 2018
Misy tanora mitondra fiara tsy misy taratasy, rehefa sakanana sy savaina, dia mamoaka karatra maha « assistant parlementaire », hoy ny fitantaran’ny polisy iray manara-maso ny ffamoivoizana ao Toamasina. Ny fanazavany hatrany no nahalalana fa misy tanora 19 taona, dia efa manana io karatra maha « assistant parlementaire » io. Nanjary toy ny fizarana vatomamy ny fizarana io karatra io ankehitriny.
Manao antso avo amin’ny Antenimieram-pirenena ilay polisy mba hanara-maso momba io fanomezana karatra ataon’ny solombavambahoaka sasany io. Lasa fitaovana entina anindriana bokotra eny rehetra eny mantsy no ampiasan’ireo tanora sasany manana io karatra io.